ANDAVAMAMBA : Vehivavy nihetsika androbe, nampiteraka fitohanan’ny fiara
Tranga hafahafa izay nahavariana ireo mpivezivezy no niseho teny Andavamamba eto an-drenivohitra, omaly maraina tokony ho tamin’ny folo ora tany ho any raha toa ka vehivavy iray nihetsika aretina no nibahana ny lalana nampitohana ny fifamoivoizana. 14 novembre 2017
Raha ny zava-nisy hita teny an-toerana tamin’io fotoana io dia tokony ho telopolo taona teo ilay vehivavy ary nitsirara sy nihotakotaka eraka ny arabe.
Betsaka ireo vatan-dehilahy nibata sy nisintona azy saingy vaky vava ny rehetra noho ny fahatanjahany. Soa ihany fa nisy olona niaraka taminy satria tena tao anatin’ny fotoana elaela mihitsy vao nisava ny aretina.
Raha ny filazan’ilay ramatoa niaraka taminy dia manana aretina mitaiza toy ny “androbe” io tovovavy io ka rehefa mafana ny andro na misy zavatra tsy zakany dia mihetsika avy hatrany izany. Tsy hitahita akory dia nitohana izay tsy izy ny fiara manodidina teny amin’ny Jirama Andavamamba.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1882) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021